नेताकै घरमा यस्तो : १४ वर्षीया छोरीको ३० वर्षीय युवकसँग बिहेको तयारी, ५० लाख खर्च – Etajakhabar
नेताकै घरमा यस्तो : १४ वर्षीया छोरीको ३० वर्षीय युवकसँग बिहेको तयारी, ५० लाख खर्च
काठमाडौँ । ६ कार्तिकका लागि विवाहको छिनिएका थियो। सोही अनुसार बेहुलीको घरमा पूर्णतयारी भएको थियो। केटीको घरमा ६ गते विहानै देखि चहलपहल बढिरहेको थियो। दिन बित्दै गयो।
उनको घरमा छिमेकी र आफन्तजनको भिडभाड पनि उत्तिकै बढ्दै गयो। विवाहमा सरिक हुन विभिन्न ठाउँबाट आफन्तजनहरु आइसकेको थिए। जसले घरपरिवार र आफन्तजनमा उत्तिकै उत्साह थपेको थियो। वैवाहिक समारोहमा सहभागि हुन आउने जन्ती र आफन्तजनको स्वागतमा खानपिनका लागि विभिन्न परिकारहरु साँझसम्म तयार भइसकेको थियो। थप तयारी हुने क्रममै थियो।
रातिको करिब ११ बजे तिर जन्तीको लाबालस्कर बेहुलीको घर आयो। करिब तीन सय भन्दा बढीको संख्यामा करिब ४० वटा गाडीमा आाएको जन्तीलाई स्वागत गर्न बेहुली पक्ष र आफन्तजन तम्तयार भएर जुटिसकेका थिए। जन्ती आएपछि शुरुमा जन्तीलाई स्वागतका लागि पानी र खाजा खुवाइयो। त्यसपछि वैवाहिक कार्यक्रम शुरु गराउन बेहुली पक्ष जुटे।
त्यसको केही समयमै बेहुला र वेहुलीबीचको निगाह (स्वयंवर) सुरु हुन लागेको थियो। पूर्णरुपमा सिङ्गारिएर स्वयंवरको लागि वेहुली कोठाबाट प्रस्थान गर्दै थिइन्। त्यहीँ बेला उक्त समारोहमा सुरक्षाकर्मीहरुको जम्बो टोली पुग्यो। सबैलाई लाग्यो सुरक्षाकर्मीहरु विवाहमा सरिक हुन आए। त्यसले त झन् वैवाहिक समारोहमा सहभागि हुन आएकाहरु उत्साहित भए।
तर जब प्रहरी प्रमुखले वेहुलीको उमेर कति हो ? उमेर नपुगेको केटीको विवाह गर्न पाउदैन, विवाह रोक्नुपर्यो भनेपछि उत्साहित सबैमा निराशा छायो, कोलाकल मच्चियो। खुसीले रमाइरहेकाहरुको उक्त बैवाहिक मण्डपमा। जन्तीमा सहभागि हुन आएकाहरुबीच भागाभाग चल्न थाल्यो। उक्त समयको दृश्यले सुरक्षाकर्मीहरु कुनै झडप नियन्त्रण गर्न आएको झैँ भएको बताउछन् स्थानीयहरु।
विवाहका लागि जन्ती वेहुलीको घरमा आएर विवाह रोकिदा वेहुली पक्षलाई तनाव नहुने कुरै भएन। स्थानीयहरु र वेहुली परिवारले प्रहरीलाई पटक पटक विवाह हुनदिन आग्रह गरिरहे। तर प्रहरी प्रमुख कानुन विपरित विहे गर्न पाइदैन भनेर आफ्नो अडानबाट टसकोमस भएनन्। र विवाह नगरिकन जन्तीलाई फर्काइयो।
यो घटना सिरहाको हो। सोमबार राति लहान नगरपालिका ६ बस्ने मोह्मद ताहिर अन्सारीको छोरी सबिला खातुन विवाह गर्न सजिएकी थिइन्। भारतको बिहार प्रदेश अन्तर्गत मधुवनी जिल्ला पद्मा ग्रामबाट मो आशिफ एकवाल जन्ती लिएर आएका थिए।
तर बेहुलीको उमेर नपुगेर विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि विवाह रोक्न लगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए। उनी भन्छन्–‘बाल विवाह हुन लागेको सूचना आयो, त्यसपछि विवाह भइरहेको ठाउँमा पुग्दा केटी बालिका भेटियो । त्यसैले विवाह रोक्न बाध्य भयौं । त्यसपछि बेहुला जन्ती लिएर राति नै फर्कियो ।’ उनले भने–‘करिब ४० वटा भन्दा बढी गाडीमा ३ सयभन्दा बढी जन्ती आएको देख्दा म नि अचम्म भए।’
बालिका सबिला घर छेउमै रहेको लहान मेरी चिल्ड्रेन एकेडेमीमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत छिन्। बालिकाको उमेर १४ बर्ष मात्रै पुगेको छ। बेहुला एकवालको उमेर अन्दाजी २९/३० बर्ष जति रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवेदीले बताए। उनले भने –‘केटा र केटीबीचको उमेर अन्तर पनि धेरै छ।’
करिब ५० लाख भन्दा बढी खर्च केटी बालिका भएकोले विवाह त भएन। तर बेहुली पक्षको खर्च भने करिब ५० लाखभन्दा बढि भएको छ। स्थानीयहरुका अनुसार बेहुलीको स्वागतका लागि मात्रै १० लाख जति खर्च भएको देखिन्छ। जन्तीलाई खुवाउनका लागि ८ वटा खसी काटिएको थियो। भने, गरगहना सबै किनिसकेको थियो। सजावटमा मात्रै करिब २ लाखको पण्डाल बनाइएको थियो।
विवाहमा दाइजोको रुपमा बेहुलालाई दिन करिब ४० लाख बराबरको कार किनिएको स्थानीयहरु बताउछन्। तर सबिलाका बुवा मो ताहिरले आफू करिब २ लाख मात्र खर्च गरेको बताए। उनले भने- ‘खर्च जति जन्तीलाई खुवाउन र सजाबट मात्र भएको भयो। विवाहका सामानहरु सबै बर्बाद भएको छ।’ उनले थप्दै भने -‘आफूलाई कानूनी कुरा थाह थिएन। फेरी सामाजिक कुराले पनि केटा राम्रो भेटेपछि छोरीको विवाह गर्न लागेको थिए। तर मबाट ठूलो गल्ती भयो।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
आमा उममेयरमा पराजित
सबिलाकी आमा अमिना खातुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृ हुन् । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा लहान नगरपालिकाका लागि राप्रपाबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । तर उनी पराजित भइन् । उनले ३ हजार १ सय ९७ मत ल्याएर चौथो स्थान हासिल गरेकी थिइन् ।
सबिलाका बुवा मो. ताहिर दोस्रो संविधानसभाका चुनावमा उम्मेदवार बनेका थिए । नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट उनी सिरहा क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका थिए । अहिले उनी जग्गा कारोबार गर्छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक ०८, २०७४ समय: ७:०३:१७
साउनमा युवतीमा मेहन्दी र हरियो चुरा लगाउने ‘क्रेज’ माया गाढा बनाउन हरियो चुरा र मेहन्दी
मेरिल्याण्ड कलेज ८० प्रतिशत बिद्यार्थीलाई रोजगार दिने
डाक्टरको लापरवाहीले २५ बर्षिय छोरीको मृत्यु भएपछि आमा मिडियामा, हस्पिटबाटै मनिषाले लेखेको चिठ्ठी भेटियो (भिडियो)